Kuchera fekitori - China Kuchekerera kweVagadziri nevatengesi
Ultrasonic chidimbu chinonyanya kushandiswa mujusi uye chinwiwa maindasitiri kubvisa zvinobudirira zvigadzirwa senge pectin uye chirimwa pigments. Ultrasonic vibration inogona kupaza nepakati maseru maseru, ichibvumira iyo pectin, kudyara pigments uye zvimwe zvinhu zvinoyerera kubuda mukati muto. Panguva imwecheteyo, iyo ultrasound inoenderera ichishanda kuti iparadzire pectin uye nekudyara pigment zvikamu kuita zvidiki zvidiki. Izvi zvidiki zvidiki zvinogona kuve zvakaenzana uye zvakatsiga zvakagoverwa mukati mejusi. Iyo stabi ...
Ultrasonic yekuburitsa muchina wekukosha kwemafuta kutora
Ultrasonic extractors inonziwo ultrasonic emulsifiers, ari chikamu cheiyo nyowani wave yechipfuva sainzi. Iyi nzira yekuvandudza inodhura zvakanyanya kupfuura mamwe matekinoroji epamberi pamusika. Izvi zvavhura nhandare yekutamba kune zvidiki kusvika pakati nepakati mashandiro ekuvandudza zvakanyanya maitiro avo ekubvisa. Ultrasonic kuburitsa inotaura nezvedambudziko rakanyanya rekuti cannabinoids, senge THC neCDD, zvakajairwa hydrophobic. Pasina hunyoro solvent ...
Yakakwira inoshanda ultrasonic yakakosha yekudzora michina yekushandisa
Zvinyorwa zveCannabis (CBD, THC) ndeye hydrophobic (kwete mvura inogadzikana) mamorekuru. Ultrasonic yekuburitsa tekinoroji inobudirira kugadzirisa dambudziko iri. Ultrasonic chidimbu chinovimba neiyo ultrasonic vibration. Iyo ultrasonic probe yakaiswa mukati memvura inogadzira mamirioni emabhuru madiki pane chiyero che20,000 nguva pasekondi. Aya mabhuru anobva abuda, zvichikonzera rusvingo rwemasero ekudzivirira kutsemuka zvachose ...
ultrasonic miriwo michero zvirimwa kuburitsa system
Muriwo, michero uye zvimwe zvirimwa zvine zvakawanda zvinobatsira zvinoshanda zvinoshandiswa seVC, VE, VB zvichingodaro. Kuti uwane izvi zvinoshandiswa, sima maseru maseru anofanira kuputswa. Ultrasonic kuburitsa yakaratidza kuti ndiyo nzira inoshanda kwazvo. Inokasira kudedera kweiyo ultrasonic probe muiri mvura inogadzira ine simba micro-jets, iyo inoramba ichirova iyo chirimwa maseru madziro kuti iityore iyo, nepo zvinhu zviri muchitokisi rusvingo zvinoyerera zvichibuda. Main michina sezvamunoita Multifunctional dzokubvisa ...
Laboratory ultrasonic CBD midziyo yekubvisa
Laboratory ultrasonic CBD michina yekubvisa inogona kuyedza chiyero chekubvisa uye nguva yekubvisa yeCDD mune akasiyana solvents, inogona kupa vatengi nemhando dzakasiyana dze data munguva pfupi, uye nekuisa hwaro hwevatengi kuwedzera kugadzirwa.
CBD oiri ultrasonic kuburitsa michina
Simba rakasimba rekuveura rinogadzirwa neiyo ultrasonic cavitation inopinda mukati memasero emiti, inosundira iyo yakasvibirira solvent mumaseru ekutora uye kuburitsa CBD
Ultrasonic miriwo yekubvisa michina
Zvidzidzo zvakaratidza kuti mishonga yemakwenzi inofanirwa kunge iri muchimiro chemamorekuru kuti inyurwe nemasero emunhu. Iyo yekukurumidza vibration yeiyo ultrasonic probe iri mumvura inogadzira ine simba micro-jets, iyo inoramba ichirova iyo chirimwa sero madziro kuti iputse iyo, nepo zvinhu zviri muchitokisi rusvingo zvinoyerera kunze. Ultrasonic kuburitsa mamorekuru zvinhu zvinogona kuunzwa kumuviri wemunhu nenzira dzakasiyana siyana, senge kusimudzira, liposomes, emulsions, mafuta, mafuta, magel, mapiritsi, macapsule, mapoda, granules ...
ultrasonic Cannabidiol (CBD) midziyo yekubvisa hemp
Ultrasonic chidimbu chinogona kusarudza akasiyana solvents zvinoenderana neinotevera kushandiswa kweCBD, iyo inovandudza zvakanyanya chiyero chekubvisa, inopfupisa nguva yekudzora, uye inoziva inharaunda ine hushamwari uye inoshanda kudhonza.